Ividiyo yakutshanje yeApple Park isibonisa iinkundla zebhasikithi zabaqeshwa | Ndisuka mac
Kubonakala ngathi kule nyanga besingayi kuba nevidiyo entsha malunga neApple Park kwaye ngesiquphe isiqendu esitsha sale saga inde yeevidiyo siyavela kumnatha. Umntu ophetheyo ngeli xesha lokwenza ukuba imifanekiso ifikelele eluntwini akekho namnye ngaphandle kukaMateyu Roberts, umqhubi wenqwelomoya oqhuba iApple Park ixesha elithile kunye nedrone yakhe kwaye ngubani isibonisa ezinye "izincedisi" ezintsha zendawo.
Xa i-iPhone 8 entsha, i-iPhone 8 Plus, kunye ne-iPhone X zaziswa eSteve Jobs Theatre eApple Park, sonke sasicinga ukuba akusayi kubakho vidiyo zokujonga indawo. Saphinda saphazama kwaye sele sinesitolimende esitsha seRoberts esaziwayo, ke masibone enye into esiyibonayo ngaphandle kwe Iinkundla zebhola yomnyazi kunye nentenetya ezakhiwayo kuloo ndawo kubaqeshwa.
Nguwo Ividiyo yokugqibela yeApple Park ngo-Okthobha into esinayo:
Kwimizuzu nje emibini siyakwazi ukubona ukuba yonke into sele igqityiwe, ngakumbi iringi enkulu esembindini weApple Park. Nathi siyabona iindleko ze- $ 427.570.867 ezityalwe kwiApple Park yiApple. Iziko eligcwele ngokupheleleyo labatyeleli sesinye sezakhiwo ezinokubonwa esibhakabhakeni.
Asinantandabuzo yokuba iApple sele ifakwe ngokupheleleyo kwindawo kunye nabasebenzi bayo bokuqala ukusukela ngo-Epreli odlulileyo kwii-ofisi ezikufutshane nendandatho, ke lixesha lokuba kuthiwe iphupha likaSteve Jobs liyinyani, ngakumbi emva Ukuqala ngokweemvakalelo kwenqaku lokugqibela lenyanga kaSeptemba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ividiyo yakutshanje yeApple Park isibonisa iinkundla zebhasikithi zabaqeshwa
I-Telegram ihlaziywa kwi-3.5 kunye nebheji yomlawuli